တရုတ်နိုင်ငံက တွန်ဂါနိုင်ငံအား အကူအညီအသစ်များ ပေးပို့မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့ရှိ Guangzhou Baiyun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည့် တရုတ်လေတပ် ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်နှစ်စင်းပေါ်သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်နေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကွမ်ကျိုး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် တောင်ပိုင်း ကွမ်ကျိုးမြို့မှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ဒုတိယအသုတ်ကို ဆူနာမီဒဏ်ခံစားခဲ့ရသော တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ ပင်လယ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်၌ ပေးပို့ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် နိုင်ငံခြားရေးရာရုံးအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများအား ကွမ်တုန်းပြည်နယ် မြို့တော် ကွမ်ကျိုးမြို့ရှိ နန်ရှားဆိပ်ကမ်းတွင် စုစည်းလျက်ရှိကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် တရုတ်-ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ (ကွမ်တုန်း) မှ လှူဒါန်းမှုများ ပါဝင်သည်။
ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများမှာ သောက်ရေ ၁၅ တန်၊ အစားအစာ ၁၀ တန်ခန့်နှင့် မိသားစုသုံး မရှိမဖြစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အထုပ် ၃,၀၀၀ အပါအဝင် တန်ချိန် ၆၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများသည် တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်း၌ တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။
အကူအညီပစ္စည်း ပထမအသုတ်သည် တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်က ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး သောက်ရေ၊ အသားစည်သွပ်ဘူး၊ နှာခေါင်းစည်းများ၊ လက်အိတ်များ၊ ရွက်ဖျင်တဲများနှင့် စကားပြောစက်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကွမ်တုန်းပြည်နယ်နှင့် တွန်ဂါနိုင်ငံတို့သည် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မကြာခဏပြုလုပ်လျက် အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိကြောင်း မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တွန်ဂါပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြည်နယ် နိုင်ငံခြားရေးရာရုံး တာဝန်ရှိသူ Li Hongzhi က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
GUANGZHOU, Jan. 28 (Xinhua) — China plans to sendasecond batch of disaster-relief supplies from its southern metropolis of Guangzhou to the tsunami-hit Tonga by sea on Jan. 31, according to the foreign affairs office of Guangdong Province.
Photo : Photo taken withamobile phone shows disaster relief materials loaded onto two Chinese air force transport aircrafts to head for Tonga at the Guangzhou Baiyun International Airport in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Jan. 26, 2022. (Xinhua/Ding Zengyi)